Abantwana for Kidz - Galveston County Food Bank
Khuphela iPakethe yeDrive Drive
Bahluke njani abantwana eKid drive yokutya kunokuqhuba kokutya ngokubanzi?
Ukutya kweKidz drive yokutya kunceda ukuxhobisa abantwana bayo yonke iminyaka ukunceda abanye abantwana ekuhlaleni. Xa kuthelekiswa nokuqhutywa kokutya ngokubanzi, sicela izinto ezithile ezinomntwana ezinokuqokelelwa ukuxhasa inkqubo yethu yokutya kwehlobo laseKidz Pacz.
Into yangoku yomnikelo wokutya ye-2021 yile Iikomityi zeMac kunye neCheese ezingenakususwa. (naluphi na uphawu)
Ngubani onokuthatha inxaxheba kuBantwana bokutya kweKidz drive?
Nabaphi na abantwana abayinxalenye yeklasi yesikolo, iklabhu, iqela okanye umbutho banokuthatha inxaxheba kwiDrive yeKidz yokutya.
Abafundi banokufumana njani iiyure zokuzithandela?
Abafundi abafuna iiyure zokuzithandela kwisikolo sabo, kwiqela, kwiklabhu okanye kumbutho banokufumana iyure yenkonzo yokuzithandela ngomnikelo.
Iipakethi ezi-4 zeMac kunye neekomityi zeshizi = iyure enye yenkonzo yokuzithandela
Iikomityi ezili-16 zeMac & Cheese = iyure enye yenkonzo yokuzithandela
Hayi ngenxa yenkundla eyalele inkonzo yokuzithandela.
Ndibhalisa njani ukuze ndithathe inxaxheba kwiKids drive yokutya yabantwana?
Ungabhalisa ukuze uthathe inxaxheba ngokugcwalisa ifom yobhaliso kwi Abantwana bePakethe yePakethe yokutya yeKidz.
Iminikelo yamkelwe kwiZakhiwo zoLawulo lwe-GCFB, 213 6th St N, eTexas City 77590 (indawo yokupaka ibekwe ngaphandle kwe-3 Ave N), ngoMvulo-ngolwesiHlanu ngo-8 kusasa ukuya ngentsimbi yesithathu malanga. Nceda ufowunele ngaphambi kokuziswa ukuze wazise abasebenzi.